मलाई फुटबलले आफ्नो ऋण तिरेको... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
मलाई फुटबलले आफ्नो ऋण तिरेको छः मेसी
फिफा काठमाडौं, पुस ६
अर्जेन्टिनाका लागि दक्षिण अमेरिकाबाट विश्वकप २०१८ मा छनोट हुन हम्मेहम्मे परेको थियो। आफ्नो अन्तिम खेलमा मेसीको ह्याट्रिकमा इक्वेडरलाई ३–१ ले हराउन सफल भइपछि मात्र ऊ विश्वकपको लागि छानिएको थियो। र यो विश्वकपमा अर्जेन्टिना समूह ‘डी’ मा परेको छ। जहाँ आइसल्याण्ड, क्रोएशिया र नाइजेरिया रहेका छन्। हालै फिफा डटकमले लियोनेल मेसीसँग उनको खेलजीवन र विश्वकपका बारेमा गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
रूसी विश्वकपमा ब्राजिल, जर्मनीलगायतका टिमसँग अर्जेन्टिनाको स्थिति कस्तो रहने अनुमान गर्नुभएको छ?
खेल कौशलमा हामी अझै अगाडि बढी रहेका छौँ। नयाँ खेलाडीहरू टिममा थपिँदै छन्। अहिले नै हामी कुनै पनि तनाव र दबाबमा छैनौँ।
चिली, विश्वकप छनोटमा असफल हुँदा तपाईँलाई आश्चार्य लागेन?
अरू सबैलाई आश्चार्य लाग्दा मलाई पनि नलाग्ने कुरै भएन। चिली पछिल्लो दुई पटकको कोपा अमेरिकी विजेता टिम हो। उसँग धेरै प्रभावशाली खेलाडीहरू पनि छन्। बोलिभीया, भनेजुयला, इक्वेडर , कोलम्बियालगायतका टिमहरू हाम्रो महादेशमा छन्। यी सबै देशहरूको खेलबीच खासै ठूलो फरक छैन। सबै एकसे एक छन्। यसकारण पनि दक्षिण अमेरिकी छनोट कठीन बनेको हो।
ब्राजिल विश्वकप २०१४ मा अर्जेन्टिनाले भोग्नुपरेको चोट बिसेक भइसकेको छ कि छैन?
मलाई यस्तो लाग्दैन। उक्त विश्वकप हाम्रा लागि अविस्मरणीय नै रह्यो। हामी त्यो घाउलाई अलग्गै राखेर अघि बढ्न सक्दैनौँ बरु त्यो सँगसँगै हामीसँग रहन्छ। त्यसको परिपूर्ति अवश्य हुने नै छ।
तपाईँ स्वयं नै उमेरले ३० पूरा गर्न लाग्नु भइसक्यो, आफ्नो सन्दर्भमा तपाईँ आफैँलाई के लाग्छ?
यो सत्य हो म उमेरमा अगाडि बढिरहेको छु। यो भन्दैमा म खिन्न महसुस गर्दिनँ। तर म मेरो व्यक्तिगत जीवन र फुटबलसँग अत्यन्त खुसी छु। म हाल जस्तो स्थितिमा छु, यसमा सन्तुष्ट छु।
समयसँगै धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छन्, यसक्रममा तपाईँको खेल पनि परिवर्तन भयो होला नि त?
यो सत्य हो। समयसँगै धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ। सुधार पनि आउन सक्छ भने बिग्रन पनि सक्छ। मेरो खेल कौशलको कुरा गर्दा चाहिँ म मैदानमा झनै अग्रस्थानमा छु।
यसै विश्वकप छनोटमा इक्वेडरसँगको खेललाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो निकै महत्त्वपूर्ण थियो किनकि विश्वकपका लागि छनोट हुन यो खेल जित्नैपर्ने थियो। यो गुमाउनु भनेको हामी सबैको लागि र मेरो लागि पनि एउटा ठूलो आँधि आउनु सरह नै हुने थियो। त्यसबखत मलाई कस्तो लागेको थियो ठ्याक्कै भन्न त गाह्रो छ। समग्र अर्जेन्टिनी जनतालाई पनि मनमा एउटा सन्त्रास थियो। रूस विश्वकप गुमाउनु भनेको फुटबलमा सदाको लागि देश पछि पर्नु सरह थियो।
अर्जेन्टिना विश्वकपमा छनोट भइसकेपछि प्रशिक्षक जर्ज साम्पावलिले भनेका थिए कि मेसीलाई फुटबलले ऋण तिर्दै यो विश्वकप दिलाएको हो, यसलाई तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, प्रशिक्षक साम्पावलिको भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ?
हो मैले पनि सुनेको हुँ। उनले मसँगै पनि त्यसो भनेका थिए। मलाई पनि के लाग्छ भने फुटबलले मलाई आफ्नो ऋण तिरेको छ। (हाँसो...)
विश्वकप २०१८ नजिक आइरहेको छ, तपाईँलगायत अर्जेन्टिना टिमलाई नै पनि यो सहज छैन। तपाईँ यो वाक्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ? कि १०१८ को विश्वकपमा लियोनेल मेसी.....
(विचार गर्दै) त्यतिबेला सायद म तेस्रो चोटी पिता बन्दै गरेको हुनेछु.....
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुस ६, २०७४, ०८:५०:२४
विशाल मेमोरियल गोल्डकपको उपाधि आर्मीलाई
एम्बाप्पे र काभानीको ह्याट्रिक, नेमारको दुई गोल
रियल मड्रिड तेस्रो स्थानमा उक्लियो
चेल्सीलाई हराउँदै आर्सनल पाँचौ स्थानमा उक्लियो
बार्सिलोना उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै कोपा डेल रेको क्वाटरफाइनलमा
रियल कोपा डेल रेको क्वाटरफाइनलमा, एट्लेटिको बाहिरियो